Tinokukoka iwe kuwebhu webhu yePatato Union - Iyo Potato System Magazine
kuru nhau Chiziviso
28 July Potato Union inoita webinar pamwe chete nenyanzvi kubva kuFederal State Budgetary Institution Rosselkhoz Center.
Tinokoka varimi vekurima kuti vatore chikamu muhurukuro uye vabvunze mibvunzo yekufarira kune nyanzvi zvakananga.
Alexey Petrovich Krasilnikov, director director wePotato Union.
10.00 Kunyoresa kwevatori vechikamu
10.00-10.10 Kugamuchirwa kwekutaura nemutungamiriri (A.P. Krasilnikov)
10.10-11.00 FSBI Rosselkhoztsentr nhasi. Kutaura naMutungamiriri weFederal State Budgetary Institution Rosselkhoztsentr
11.00-12.00 Mhinduro kumibvunzo
Tarisiro yekuzadzikiswa kwezvitupa zvedigital;
Kubvisa tsika yekumisazve uye kupokana mhedzisiro yeakaburitswa / anoshanda chitupa nerimwe bazi reRSHC (semuenzaniso: chitupa chakapihwa neNizhny Novgorod RSHTs, pakusvika kwembeu kumutengi mudunhu reTula, iyo RSHC yemuno inotora masampuli uye kuongorora, izvo dzimwe nguva zvinokonzeresa kukakavara uye kumutsa kunetsana pakati pemutengesi nemutengi)
Pakuita kweRussian Agricultural Center yekuumbwa kwekufungidzirwa kwekupararira kwezvirwere (semuenzaniso, kunonoka blight) uye zvipembenene;
Kuitwa kweGOST 33996-2016 “Mbeu mbatatisi. Maitiro ehunyanzvi uye nzira dzekumisikidza mhando ”idanho rakakura rekusimudzira mhando yembeu mbatatisi inogadzirwa muRussia Federation, asi muyero unorerutsa zvakanyanya maererano nezinga rehutachiona. Isu tinotenda kuti kuunza izvo zvinodikanwa zvembeu mbatatisi yezviri mukati mehutachiona kumatanho akaenzana neaya anotorwa muEU kunovandudza mhando yembeu mbatatisi zvese zviri zviviri mudzimba uye kuita kuti vakwikwidze mumisika yekunze. Ikozvino kune vepamusoro zvinhu (SE, E) iyo nhanho yehutachiona inogona kusvika kusvika gumi%;
Pane kufambira mberi kwekubvumidzwa patsva kwemapazi eFederal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" muFederal Accreditation Agency.
12.00 Mhinduro kumibvunzo kubva kuvatsigiri vewebhu
Kunyoresa chinongedzo: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsf-6grzsvGdDIZRcAKLNIL3si3vslUNsC
Ndokumbirawo unyore pamberi pemusangano. Mushure mekunyora, iwe uchagamuchira email yekusimbisa ine ruzivo rwekupinda musangano. Kana uine chero mibvunzo, ndapota fona:
Tags: webinarMubatanidzwa wembatatisiFSBI Rosselkhoztsentr
Rabhoritari yekuberekesa mbatatisi yakavhura ndokutanga kushanda mudunhu reSamara!